यस्ता व्यक्तिमाथि सधैँ हुन्छ शनिदेवको कृपा, मिल्छ राजाको जस्तो सुख-सयल, तपाई पनि पर्नुभयो की ? - MassiveKhabar
by news March 16, 2022 Sports
काठमाडौँ । शनि देवलाई सबैभन्दा रिसाहा देवताका रुपमा चिनिन्छ । जसलाई न्यायका देवता पनि भनिन्छ। शनि देवले व्यक्तिलाई उसैको कर्म अनुसार फल दिने गर्छन्।शनि देवको कृपा जो कोही व्यक्तिलाई सजिलै मिल्दैन्। तर जुन व्यक्तिमाथि शनिदेवको कृपा पर्छ, त्यसलाई सजिलै धन सम्पत्ति, मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले शनि देवलाई कहिलै पनि रिसाउन दिनु हुँदैन्। यदी शनिदेव रिएसा जीवनमा सबै दुख एकै पटक आउन थाल्छ। शनिदेव एक पटक रिसाए भने उनलाई खुसी बनाउन निकै कठिन हुने गर्छ।आज हामी तपाईलाई केही यस्ता बानीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । यस्ता बानी कुनै व्यक्तिमा छ भने उसमाथि सधैँ शनि देवको सफल कृपा मिल्ने गर्छ र जीवनमा दुख तथा गरिबी हटेर जान्छ। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती बानी ?
भोली चैत ३ गते विहिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
चैत ३ गते विहिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
पैसाको बचतगर्न र खर्च कमगर्न सधै सम्झिनु यी सुत्र :